CIN Khabar नेपालमा सङ्क्रमितको संख्या : ५ जना पुग्न २ महिना, ८ दिनमा झण्डै ८ सय
नेपालमा सङ्क्रमितको संख्या : ५ जना पुग्न २ महिना, ८ दिनमा झण्डै ८ सय जेठको १४ दिन र असारको पुरै महिना कति पुग्ला ?
गोबिन्द खड्का शनिबार, जेठ १७, २०७७, १२:२३:००
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो सङ्क्रमित १० माघमा भेटिए । त्यपछि त्यसपछिका ३७ दिनसम्म एकजना सङ्क्रमित पनि भेटिएनन् । पहिलो संक्रमति चिनको वुहानबाट पुस २२ मा नेपाल आएपनि उनको चेकजाँच पछि माघ १० मात्रै रिपोर्ट पोजेटिभ भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । दोस्रो संक्रमित दुई महिना पछि १० चैतमा भेटिएका थिए ।
त्यसको दुईपछि १२ चैतमा संख्या तीन पुगेको थियो । १३ गते फेरि एकजना थपिएर संख्या चार पुग्यो । १५ गते अर्को एकजनामा थपिए संख्या ५ पुग्यो । पाँच जना संक्रमित पुग्न दुई महिना लागेको थियो । चैत महिनाभरी अथवा नेपालमा कोरोना पुष्टि भएको ८२ दिनमा जम्मा संख्या १२ पुगेको थियो ।
चैत भरीमा ११ जना वैशाखमा २ सय ३१ सङ्क्रमित देखिएकोमा जेठको १७ बिहानसम्म ९ सय ८३ संक्रमित फेला परिसकेका छन् । जेठ १७ बिहान ११ बजेसम्म संक्रमितको संख्या १२ सय २६ पुगेको छ ।
एकैदिन तीन जना थपिन बैशाख ११ लागेका थियो । त्यसपछिका दिनमा निरन्तर थपिएपनि सङ्क्रमितको संख्या १ सय संख्या पुग्न १ सय १२ दिन लागेको थियो । तर संख्या सय पुगेको १२ दिनमा नै ५ सय ७ जनामा सङ्क्रमण भेटिएको थियो ।
तर, त्यसपछिका ८ दिनमा नै ७ सय भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन् । पछिल्लो एक हप्ताको तथ्याङ्क केलाउदा हरेक घण्टा ५ देखि ७ जना संक्रमित थपिरहेका छन ।
बिहीबार सबैभन्दा धेरै १ सय ५६ जना सङ्क्रमित भेटिएकोमा शुक्रबार त्यसलाई पनि उछिनेर १ सय ७० जनामा संक्रमण देखिए । शनिबार मध्यान्न १२ बजेसम्म थप १४ जना थपिसकेका छन । फागुन भरिमा जम्मा एक जना संक्रमित भेटिएका थिए ।
यो दर हेर्दा जेठभरीमा ३ हजार नाघ्न सक्ने र कम्तिमा १५ हजारको हाराहारीमा नेपालमा सङ्क्रमित पुग्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले आँकलन गरेका छन् । स्वास्थ्य विज्ञ डा. दीर्घसिंह बम क्वारेन्टाइनको अवस्थाका कारण नै संक्रमणको दर उच्च रहने टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
‘अबको असारसम्म यो निरन्तर बढीरहनेछ त्यसपछि कम हुनसक्छ’ डाक्टर बलमे भन्नुभयो, ‘यो सक्रमणदर हेर्दा १५ हजारको हाराहारीमा पुग्न सक्छ । ’ सरकारले भने ५ हजार पुग्ने आँकलन सहित त्यसकै तयारी गरिरहेको छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रवीन्द्र पाण्डे, कोरोना समुदायमा फैलिएर यो संख्या नपुगकोले भयावह हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । ‘समुदायमै फैलन पुगेको भए बढ्ने गति तीब्र हुन्थ्यो ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालका सङ्क्रमित अधिकांश कम उमेरका भएकोले अर्थात जोखिम बर्ग नभएकोले अन्तराष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार आइसीयु र भेन्टिलेटरमा पुग्ने तथा मृत्यु हुनेको संख्या धेरै हुँदैन ।’
भयावह भयो भने ?
सङ्क्रमित दर यही अनुपातमा कायम रहे आइसीयु र भेन्टिलेटरमा पुग्ने संख्या पनि एकैपटक थपिने आंकलन गरिएको छ । बिरामीको उपचारका लागि देशैभर भेन्टिलेटर र आईसीयूको अभाव रहेको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्।
कोरोनाभाइरसका कारण सामान्य वा मध्यम खालका लक्षणहरू देखिएका बिरामीको तुलनामा गम्भीर लक्षण भएका र पहिलेदेखि नै विभिन्न रोग लागेका बिरामीको मृत्यु धेरै हुने गरेको छ। सङ्क्रमित सिकिस्त भएर सास फेर्न गाह्रो भएमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ।
देशभर करीब ६०० को हाराहारीमा भेन्टिलेटर र ११ सय आईसीयू बेड छन्। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण ५ सय मान्छेलाई मात्रै त्यो त्यस्तो उपचारमा राख्नुपर्यो भने अवस्था भयाबह हुनसक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले भनेका छन्। सरकारले आईसीयू र भेन्टिलेटर थप भइरहेको भने बताइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १७, २०७७, १२:२३:००